Xiaomi Mi Band 4: namoaka ny sary ofisialy voalohany | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Band 4 dia efa manana daty fampisehoana, araka ny nambara andro vitsy lasa izay. Amin'ny 11 Jona no hianarantsika ny taranaka fahefatra amin'ny bracelet hetsika ho an'ny marika sinoa. Tsikelikely, rehefa antomotra ity daty ity, dia mianatra antsipiriany momba ny fehin-tànana, izay efa manana angon-drakitra ampy isika hatreto. Ankehitriny, inona ny sary ofisialy voalohany namoaka azy, izay manamarina antsipirihany roa.
Ny iray amin'ireo lafiny izay hiova amin'ity Xiaomi Mi Band 4 ity dia ny efijery, izay amin'ity tranga ity dia ho miloko. Misaotra an'ity sary vaovao ity dia hitantsika fa hitovy ihany izany amin'ny farany, ka efa fantatsika ny iray amin'ireo lafin-javatra lehibe hahaliana ity taranaka vaovao ity.
Azontsika atao koa ny mahita fa mamela antsika ny marika sinoa famolavolana izay loko no lafiny iray tena ilaina. Misy maodely marobe, miaraka amin'ny fehy misy loko hafa amin'ity tranga ity. Mba hahafahan'ny tsirairay misafidy ny kinova an'ity Xiaomi Mi Band 4 izay tena tiany indrindra ity. Volavola falifaly, miaraka amin'ny fijery azo antoka fa ho tian'ny maro.
Amin'ity taranaka vaovao ity dia hisy tontonana OLED hampiasaina izay lehibe kokoa noho ny tamin'ny tranga teo aloha. Misy koa ny fampidirana ny Bluetooth 5.0 ao anatiny, ankoatr'izay, ny tsaho milaza izany hisy ny kinova an'io izay havoaka miaraka amin'ny NFC. Na dia zavatra mbola tsy voamarina aza izany.
Soa ihany, Ny 11 Jona izao vao hametraka fisalasalana isika momba izay handao antsika ity Xiaomi Mi Band 4 ity. Voalaza ihany koa fa ny marika sinoa dia tsy vitan'ny hoe hanolotra ny fehin-tànana misy hetsika vaovao. Azontsika atao ihany koa ny manantena fa haseho ny smartwatch vaovao anao.
ve Ilay famantaranandro Xiaomi Amazfit Verge 2 izay ho avy miaraka amin'ity Xiaomi Mi Band 4 ity amin'ny hetsika. Ka ny marika sinoa dia manavao ireo karazana fitafiana anaovany. Zavatra manan-danja satria izy ireo dia iray amin'ireo marika amidy indrindra ao ity tsena androany ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Sivana ny sary ofisialy voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 4
Huawei dia tsy afaka mametraka mialoha ny Facebook amin'ny findainy intsony
Stadia dia ho hita amin'ny Pixel 3, 3 XL, 3a ary 3a XL amin'ny fiandohany